Go'aan ka gaarista Fiktooriya: Sababaha Rajo-galinta - Codadka Shaqaalaha Galmada VIC
You are here: Bogga ugu weyn / Articles / Kala-sooca Fiktooriya: Sababaha Rajo-Weyn
Fikirkii ugu dambeeyay ee Fiktooriya ee sharciyadeeda ku saabsan shaqada galmada wuxuu ka bilaabmay 1985 koox la shaqeysa Waaxda Qorsheynta oo ay ku xigto Neave Enquiry for Prostitution taas oo ka dhalatay Sharciga Sharciga Dhillaysiga ee 1986 iyo markii dambena, Sharciga Shaqada Galmada ee Gudaha 1994. Shaqada galmada gudaha waxay sharci ka noqotay galmo diiwaangashan shaqaalaha iyo guryaha dhillaysiga ee shatiyeysan.
Waqtigaas waxaan ahaa isku-duwaha Dhillayaasha Wadajirka ah ee Victoria, PCV. Markii hore waxaa loo sameeyay sidii koox u ololeysa xuquuqda shaqaalaha galmada, laakiin sanadkii 1985 PCV wuxuu isku badalay adeeg horudhac ah oo bixiya waxbarasho caafimaad iyo adeegyo taakuleyn ah oo loogu tala galay shaqaalaha galmada ee dhillooyinka, jidadka iyo hay'adaha galbinaya. Waxay ku saleysan tahay Inkerman Street St Kilda, ururkeena curdinka ahi wuxuu hormood u ahaa xuquuqda ku saleysan yareynta waxyeelada iyo adeegyada taageerada asxaabta oo tan iyo markii ay noqotay heerka. Tani waxay ka dhacday macnaha HIV / AIDS oo ah xaqiiq cusub oo cabsi leh. Sababtoo ah waxbarashada, cirbadaha nadiifka ah iyo cinjirka galmada ayaa ahaa dariiqooyinka kaliya ee looga hortagi karo HIV waxay ahayd mid muhiim ah oo deg deg ah in qalabkan la gaarsiiyo dadka aadka ugu baahan. Iyagoo maalgelinaya ururada ragga khaniisiinta ah, dadka isticmaala daroogada iyo kuwa ka ganacsada galmada si ay u qabtaan shaqadan muhiimka ah inkasta oo diidmada akhlaaqeed ee lama huraanka ah, dowladaha Australia ay ka hortageen cudur aad u ballaaran oo HIV ah. Sannadkii 1987-kii waxaa gobollada oo dhan ka jiray ururro u dooda xuquuqda shaqaalaha galmada. Fiona Patten waxay hogaaminaysay midka Canberra. Sannadkii 1988-kii ayaannu isugu nimid sidii Isbahaysiga Casaanka.
Jawigaan adag ee 'Neave Enquiry' wuxuu furay 'su'aasha' 'dhillanimada' si fikrad kasta oo macquul ah oo ku saabsan sida loo joojiyo ama loo xakameeyo ay uga soo daadato kaniisadaha, kooxaha haweenka, ururada caafimaadka, kooxaha dadka deegaanka iyo kuwa kale. Soo gudbinta PCV ayaa ka mid ahayd. Waxay dejisay doodaha shaqaalaha galmoodka ee ku saabsan xukun-ka-qaadista oo weli ku habboon maanta. Waxay ka doodday sharci ka soo abaabulay warshadaha galmada laba heer - shaqaale galmo diiwaangashan / dhillaysi shati leh oo sharci darro ah dhismayaal aan diiwaangashanayn oo sharci darro ah. Awood adag ayaan ku doodnay in diiwaangelinta iyo STI-da khasabka ah iyo baaritaanka HIV ee shaqaalaha galmada ay labaduba xadgudub ku yihiin xuquuqda aadanaha iyo siyaasad xumo caafimaad. Waxaan dhahnay inay isla markaa u horseedi doonto in ka badan tijaabinta kuwa aan u baahnayn oo ay ka fogaato kuwa u baahan. Nasiib darro taasi waxay dhab ahaan ka soo baxday geeddi-socodkii siyaasadeed ee baaritaanka ka dib. In kasta oo dhillayaasha qaar laga dhigay sharci, noocyada badankood ee howlaha galmada waxay ahaadeen kuwo dambiilenimo ah iyo shuruudaha shaqaalaha galmada ka diiwaangashan yihiin una soo gudbiyaan baaritaan caafimaad oo joogto ah.
Shaqadayada PCV-ga ee aan la leenahay shaqaalaha galmada ee dhammaan noocyada jinsiga ee isticmaala mukhaadaraadka, muhaajiriinta, queer, ama dadka asaliga ah ayaa ku wargalinay digniintayada 'nuglaanta waxay ku xirnaan doontaa waaxda sharci darrada ah'. Waxaan sidoo kale xasuustaa saadaalin sax ah oo ku saabsan in waaxda sharci darada ah ay si dhaqso leh u balaarin doonto maxaa yeelay shaqaalaha galmada waxay 'cagtooda ku codeyn doonaan' marka loo eego xaaladaha cadaadiska iyo mushaharka yar ee ka soo bixi doona qeybta sharciga halkaasoo madaxdu ay awooda oo dhan ku leeyihiin sharciga cusub.
Si kastaba ha noqotee, wareegga mid ka mid ah sharciga dib-u-habeynta shaqada galmada ee Fiktooriya wuxuu dareemay xoogaa guul ah, ama ugu yaraan guuritaanka jihada saxda ah. Wax yar ka dib markii aan ka tegey Australia si aan uga shaqeeyo caafimaadka adduunka barnaamijyada shaqada galmada iyo siyaasadaha waddammada soo koraya.
Si dhakhso leh ugu soco 2020. Waxaan joogaa Melbourne xagaaga Xarunta Michael Kirby ee Caafimaadka Dadweynaha iyo Xuquuqda Aadanaha ee Jaamacadda Monash. COVID wuu yimid mana ka bixi karo dalka laakiin waxaan ku faraxsanahay markaan maqlay in Victoria ay dib u eegi doonto sharcigeeda shaqada galmada iyo sababaha aan u aaminsanahay in Victoria ay ugu dambayn sax u noqon doonto aniga isla markiiba. Kuwani waa sababaha aan u leeyahay rajadayda.
Xisbiga shaqaalaha ayaa qaatay siyaasad ah in shaqada galmada la edbiyo. Shuruudaha tixraaca waa inay tixgeliyaan sida shaqada galmada waa in aan go'aan laga gaarin haddii waa inay noqotaa.
Fiona Patten. Sannadihii la soo dhaafay xoogaa shaqaale galmo ah iyo xiddigo jilicsan ayaa loo doortay baarlamaannada qaarkoodna xitaa waxay soo bandhigeen biilasha dib-u-habeynta sharciga ee arrimaha galmada. Hase yeeshee in yar ayaa guuleysatay. Xirfadda Fiona iyo diiwaanka baarlamaanka waxay muujineysaa inay tahay mid la ixtiraamo oo waxtar leh.
Soddon sano oo sharci darro ah sharciga Victoria ayaa baabi'isay dhaleeceynta taasoo laga yaabo inay ka hortagto qaylada bulshada in dib u habeynta sharciga shaqada galmadu ay istaagi karto.
Taariikh badan ayaa soo ifbaxday ilaa 1980s taas oo macnaheedu yahay in waxbadan laga fahmay shaqada galmada. Waxyaabaha isku xira shaqada galmada iyo rabshadaha, caafimaad xumo, ka ganacsiga dadka, ka faa'iideysiga galmada iyo ku xadgudubka mukhaadaraadka ayaa la yaqaan. Istaraatiijiyadaha ka saarida iyaga ayaa lagu tijaabiyay New Zealand iyo New South Wales iyo dalal kale oo fog.
HIV hadda waa mid laga hortagi karo oo la maamuli karo oo Fiktooriya waxay leedahay cudur aad u yar oo ku dhaca cudurka HIV.
Xiisadda siyaasadeed ayaa si caalami ah ugu rogtay ururro ay ka mid yihiin Amnesty International iyo hay'adaha Qaramada Midoobay oo si rasmi ah u taageeraya go'aan ka gaarista xukunka jinsiga.
Dabcan weli waxaa jira caqabado muhiim ah. Go'aan ka gaarista waa inuu ka dhignaadaa dhammaadka bil kasta ee qasabka ah ee HIV iyo baaritaanka galmada ee galmada shaqaalaha. Si kastaba ha noqotee inkasta oo ay aad u hooseyso dhacdooyinka HIV ama STI ee ka dhex shaqeeya galmada, dawladaha ayaa si qasab ah ku baaraya shaqaalaha galmada (gaar ahaan haweenka) wali waa caan.
Dadku waxay si sax ah uga walaacsan yihiin ka ganacsiga iyo ka faa'iideysiga galmada. Si kastaba ha noqotee waxaa jira caddeyn adag oo lagu taageerayo sheegashada xuquuqda dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda galmada 'sheegashada in sharciyada dambiyada ka dhanka ah shaqada galmada ay ka sii darayaan tahriibta halkii ay ka bixin lahaayeen wax difaac ah.
Xaqiiqdi ma jiro wax soo jeedin ah in go’aamintu ay baabi'ineyso awoodda bilayska ee lagu aqoonsanayo dhibbaneyaasha tahriibinta dhabta ah ama carruurta yaryar ee si xun loola dhaqmay goob kasta.
Waxaa jiri kara fikrad khaldan oo ah in xukun ka dhigista ay ka dhigeyso warshadaha galmadu 'bilaash dadka oo dhan' - in ay jiri doonaan codsiyo iyo xayeysiisyo qaawan oo ka dhaca jidadka, guryaha dhilladuhu ay ka furaan meel kasta oo ay jecel yihiin iyo shaqooyin galmo ahaan laga siiyo Centrelink. Tani gabi ahaanba maahan kiiska. Xaqiiqdii hawsha ugu weyn ee Dib-u-eegista waa in la helo xeerar ku habboon warshadaha galmada. Tani toos uma aha haba yaraatee. Xeerarka aan habboonayn waxay noqon karaan kuwo aan wax u dhimeynin sida sharciga dambiyada. Waa lagama maarmaan in talooyinka Dib-u-eegista ee ku saabsan sharciyeynta lagu wargeliyo iyadoo si taxaddar leh loo dhageysto shaqaalaha galmada ee dhammaan qaybaha warshadaha.
Waxay ahayd wax lagu farxo qadhaadh in la yiraahdo 'waan kuu sheegnay sidaas' maadaama qaddarka saadaaliyay ee Victoria labada warshadaha galmada sharciyeysan soo baxday kadib dibuhabayntii ka bilaabatay 80s. Waxaan rajeyneynaa sannadaha soo socda inay u doodaan shaqaalaha u dooda xuquuqda galmada waxay awoodi doonaan inay dhahaan 'waan kuu sheegnay sidaas' markii ay cadaato in kala-soocista 2020-ka ay ka dhigan tahay in shaqaalaha galmada ay ku nool yihiin kana shaqeeyaan cambaareyn, takoorid iyo xadgudubka.
Articles Go'aaminta, Fiona Patten, yareynta waxyeelada, Machadka Michael Kirby, Jaamacadda Monash, Su'aalo weydiinta, Dhillooyinka Wadareed ee Fiktooriya, Xeerka Xukunka Kacaanka ee 1986, PVC, Shaqada Galmada, Xeerka Shaqada Galmada 1994